Emva kwexesha, ukungeniswa kwentsimbi yelizwe lam kunye nokuthumela kwelinye ilizwe kunokubonisa ipateni "ephindwe kabini" - China Foshan Hermes Steel
Emva kwexesha, ukungenisa kunye nokuthunyelwa kwentsimbi kwelizwe lam kunokubonisa ipateni "ephindwe kabini"
Ngokwezibalo zamvanje ezivela kuLawulo Jikelele lweeMpahla, ilizwe lam lithumela ngaphandle i-7.542 yezigidi zeetoni zentsimbi ngo-Matshi, ukonyuka konyaka-nge-16.5%; kwaye kwangeniswa i-1.322 yezigidi zeetoni zentsimbi, ukonyuka konyaka-nge-16.3%. Kwiinyanga ezintathu zokuqala, ilizwe lam lithumele ngaphandle i-17.682 yezigidi zeetoni zeemveliso zentsimbi, ukonyuka konyaka-nge-23.8%; Ukungeniswa ngaphakathi kweemveliso zentsimbi ebezinyuke kwaba ziitoni ezizizigidi ezi-3.718, ukonyuka konyaka-nge-17.0%.
Enye yezona zinto zixhalabisayo kukuba ukuthunyelwa kwentsimbi kwilizwe lam ngoMatshi kunyuke nge-2.658 yezigidi zeetoni xa kuthelekiswa noFebruwari, ukonyuka kwama-54.4%, ukuseta ukuthengiswa kwentsimbi okuphezulu kwenyanga ukusukela ngo-Epreli 2017.
Ngokombono wombhali, ngokufunyanwa kwakhona kwezinto zelizwe lam ezithunyelwa kumazwe angaphandle, ukungeniswa kwentsimbi yelizwe lam kunye nokuthunyelwa kwelinye ilizwe kungabonisa ipateni "ephindwe kabini" kwixesha elizayo. "Owona uphakamileyo" ubonakalisiwe ngokomthamo: umthamo opheleleyo wokungeniswa kwentsimbi kunye nokuthunyelwa kwelinye ilizwe uya kuhlala kwinqanaba eliphezulu; “okwesibini okuphezulu” kubonakala kwinqanaba lokukhula, kwaye ukungeniswa kwentsimbi kunye nokuthunyelwa kwelinye ilizwe kuyakugcina ukukhula okuphezulu kakhulu unyaka wonke. Izizathu eziphambili zezi zilandelayo:
Okokuqala, phantsi kwemvelaphi yencopho yekhabhoni kunye nokungathathi hlangothi kwekhabhoni, eyona mimandla iphambili evelisa intsimbi iye yahlengahlengisa imigaqo-nkqubo yoxinzelelo oluphezulu yoxinzelelo lokusingqongileyo, ekhokelela ekwehliseni ngokwezigaba kunikezelo lweemveliso zentsimbi eziphambili ezinje ngeebhiliti kunye nentsimbi yokuqhekeza. Ngaphantsi kwale meko, iimveliso zentsimbi zaphesheya kwezilwandle zaphuphuma kwimarike yasekhaya. Oku kunokubonwa kuthengiso lwakutshanje olukhulu lwee-billet zetsimbi zaseVietnam eziya e-China.
Umntu ofanelekileyo ophetheyo kumanyano lweshishini sele echazile ukuba iyakhuthaza ukonyuka kokungeniswa kweemveliso eziphambili ezinje ngeebhanti zentsimbi kwaye inika umdlalo opheleleyo kwindima yentengiso yokungenisa ekuqinisekiseni ubonelelo lwentengiso yasekhaya. Umbhali ukholelwa ekubeni ukungeniswa kweemveliso eziphambili zentsimbi kuya kulungelelaniswa kwixa elizayo, okuya kuthi kukhuthaze ngakumbi ukukhula kokungeniswa kweentsimbi kwilizwe lam liphela.
Okwesibini, umahluko wexabiso phakathi kweemarike zasekhaya nakwamanye amazwe ubonelela ngemeko ezilungileyo zorhwebo lwangaphandle lwentsimbi. Ngokubuyiselwa kwemfuno kwiimarike zaphesheya, amaxabiso ezinyithi aphindaphindiwe kakhulu, kwaye umsantsa wamaxabiso kunye neemveliso zentsimbi yasekhaya uye wanda ngakumbi. Thatha i-HRC njengomzekelo. Okwangoku, amaxabiso aqhelekileyo e-HRC kwimakethi yase-US afike kwi-US $ 1,460 / ngetoni, elingana ne-RMB 9,530 / itoni, ngelixa ixabiso le-HRC lasekhaya limalunga ne-5,500 Yuan / itoni kuphela. Ngenxa yoku, ukuthunyelwa ngaphandle kwentsimbi kunenzuzo ngakumbi. Umbhali uqikelela ukuba iinkampani zentsimbi ziya kukhawulezisa ukucwangciswa kwee-odolo zokuthumela kwelinye ilizwe kwinqanaba elizayo, kwaye umthamo weemveliso zentsimbi uya kuhlala uphezulu kwixesha elifutshane.
Okwangoku, eyona nto iphambili ekungaqiniseki ngayo kukuhlengahlengiswa komgaqo-nkqubo wesaphulelo serhafu yokuthumela ngaphandle. Xa lo mgaqo-nkqubo uzakuphunyezwa awuthathwanga isigqibo. Nangona kunjalo, umbhali ukholelwa ekubeni akunakulindeleka ukuba isaphulelo kwirhafu yokuthumela ngaphandle intsimbi "isuswe" ngokuthe ngqo, kodwa "ukulungiswa kakuhle" ukusuka kwi-13% yangoku ukuya kwi-10% kunokuba sisiganeko esikhulu.
Kwixa elizayo, ubume beemveliso zentsimbi ezithunyelwa kumazwe angaphandle ziya kusondela kufutshane neemveliso ezongezwe ngexabiso eliphezulu, kwaye ukuthunyelwa kwentsimbi ngaphandle kuzakungena "kwinqanaba eliphezulu" ezintathu "zomgangatho ophezulu, ixabiso eliphezulu elongeziweyo, kunye nevolumu ephezulu" ukubiyela ifuthe leendleko. Uhlengahlengiso lwerhafu.
Ngokukodwa, umthamo wokuthumela ngaphandle weemveliso ezizodwa zentsimbi ziya kunyuka ngakumbi. Idatha ibonisa ukuba kwi-53.68 yezigidi zeetoni zentsimbi ezithunyelwa ngaphandle lilizwe lam ngo-2020, imivalo kunye neengcingo zibalwa nge-12.9%, ii-angles kunye ne-steels zecandelo zibalelwa kwi-4.9%, iipleyiti ezingama-61.9%, imibhobho i-13.4%, kunye nezinye iintsimbi Iintlobo ezahlukeneyo zibalwe ngumyinge ofikelele kwi-6.9%. Kule nto, i-32.4% yeyesinyithi esikhethekileyo. Umbhali uqikelela ukuba kwixa elizayo, phantsi kwempembelelo yohlengahlengiso lomgaqo-nkqubo werhafu yokuthumela ngaphandle, umyinge weemveliso zentsimbi ezizodwa ezithunyelwa kumazwe angaphandle ziya kukhula ngakumbi.
Ngokuhambelanayo, ukungeniswa kwentsimbi kuyakubonisa ipateni "yokwanda ngokukhawuleza kwinani leemveliso eziphambili ezingeniswa elizweni kunye nokwanda okuzinzileyo kokungeniswa kwentsimbi ephezulu". Njengoko uphando lwasekhaya kunye nophuhliso lwentsimbi ephezulu iqhubeka isanda, umlinganiso wentsimbi ephezulu engeniswe ngaphandle yentsimbi inokuhla. Iinkampani zentsimbi yekhaya kufuneka zikulungiselele ngokupheleleyo oku, zisebenzise ubume bemveliso kwangexesha, kwaye zifune amathuba ophuhliso kwipateni eguqukayo yorhwebo lokungenisa kunye nokuthumela ngaphandle.